eHarmony Oo Daahfuray Goob Lagu Sameeyo Ciyaaraha for Srsly
Goobaha shaqo raadinta waa hal dersin. Waxaa jira in badan oo iyaga ka mid ah xitaa qaar ka mid ah xitaa waxay isku dayaan inay kala soocaan iyagoo sheeganaya inay yihiin, "eHarmony" shaqooyinka. Sida laga soo xigtay Dr. Neil Clark Warren, aasaasaha eHarmony, "Iyagu ma ahan." Hadda shirkadiisu waxay leedahay shey sharci ah oo lagu caddeeyo waana hab ka caqli iyo casriyeysan intaad moodeyso. Warren iyo kooxdiisii ​​wax soo saarku waxay bilaabeen Xirfado Farsamo by eHarmony in